COLORADO BARADHO COLORADO: HELITAANKA IN LA OGAADO CADOWGA EE BARADHO AH - BARADHADA
Colorado baradho Colorado: sharaxaad ka mid ah cayayaan aan naxariis lahayn ee baradho iyo ma aha oo kaliya
Xaraashka Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata) waxaa iska leh qoyska curumi caleen, amar ah bahalka. Tani waa mid ka mid ah cayayaanka ugu caansan ee beerta beerta iyo khudradda, taasoo keenaysa dhaawac weyn.
Ma taqaanaa? Wixii midabkiisa shanta midood ee madow ee mid kasta oo ka mid ah labada gacmeed, Colorado baradho qotoma waxay heshay magaceeda, taas oo macnaheedu yahay toban xariiq oo ku qoran Latin.
Muuqaal ka mid ah baradho baradho Colorado
Dad badan ayaa ogyihiin waxa baradhada barafka ee Colorado u egyahay - midabkiisa dhajisan, jilicsan oo huruud ah oo midab-casaan ah wuxuu leeyahay shan jibbaar madow mid kasta; Isku-dhafkan waa mid la aqoonsan karo beerta cagaaran. Dumarku way yar yihiin, wayna ka culus yihiin ragga. Jidhka imago waa oval, dhererkiisu wuxuu gaari karaa 8 illaa 15 mm, ballaciisu yahay - qiyaastii 7 mm. Midabada laf-dhabarta ee caloosha oo leh dhibco madow. Dhismaha qaybta sare ee jirka ee baradho baradho ah Colorado waxay leedahay qaabka qaabka, qaabka hoose - flat. Baalalka webbigga ayaa si fiican loo horumariyaa oo u oggolaanaya inuu lamid ah si uu u duulo masaafo dheer. Madaxa duuduubku waa mid aad u yar oo ka yar jirka, oo ku dhowaadaa si qumman oo waxoogaa dib looga soo baxo, qaabaysan yahay qaabka.
Xayawaanku wuxuu leeyahay saddex lugood oo lugood ah. Lugaha khafiifka ah ee duqsigu waa daciif, oo leh cirridka dhaqdhaqaaqa cayayaanka. Indhuhu waxay ku yaalliin dhinacyada, madow, waxay leeyihiin qaab beed ah. Indhaha indhaha waxaa ku jira anteeno, oo ka kooban toban qaybood.
Dirxiga Colorado baradho Colorado waa qiyaastii 1.5 cm dheer, oo leh madax madow yar. Dhirta lafa-xayawaanka, oo markaa noqda casaan caan ah, waxay leedahay laba saf oo dhibco yaryar oo dhinacyada dhinac ah.
Ukumaha cayayaanku waa mid liin ah oo casaan ah, dheddiguna waxay u dhigtaa ilaa 60 ukumo yar yar oo hal dhinac ah.
Waa muhiim! Marka baradho-baradho Colorado la burburiyo, hal-qeyb ah ee cagaarka barafka, dhirta ay hoos u dhaco by saddexaad.
Xaggee bay ku jirtaa baradhada baradho ee Colorado ka timaado
Asalka ka soo duuduubka baradhada Colorado wuxuu ka bilaabmaa Mexico, laga bilaabo waqooyi-bari ee ka mid ah, halka laga soo galo Maraykanka. Sanadkii 1859, cayayaanku waxay waxyeelo weyn u geysteen dhirta barafka ee gobolka Colorado, ka dib markii loo magacaabay baradho baradho ah. Waxaa la aaminsan yahay in cayayaanku la keenay Europe 1870-kii markii ay maraakiibta xamuulka ah u duulayeen Atlantic. Xayawaanku wuxuu si guul leh ugu habboon noloshiisa Faransiiska iyo England wuxuuna ku faafay dalalka kale ee yurub.
1940s, marka jiritaanka baradhada Colorado ee marka hore ka muuqata USSR, shaqaalaha beeraha iyo karantiilka karantiilku waxay isku dayeen in ay ka badbaadiyaan dhulkaas, laakiin cayayaanku si aad ah ayay u socdeen dhulka guud ee dal weyn. Xaaladaha cimilada ee ku habboon, dalagyada waaweyn ee beetle iyo dirxiga, iyo fecundity waxay saamayn ku yeelatay dejinta cayayaanka waxyeello leh. Raadinta si ay uga jawaabto su'aasha ah meesha qotada baradhada ee Colorado ka yimid Ukraine, Biologists badan ayaa isku raacay in cayayaanku ku duulay xaddi badan oo ka soo jeeda Hungary iyo ka dibna Czechoslovakia on guga dabaysha iyo diiran, marka hawada hawada ka qaybqaatay si ballaaran oo degdeg ah.
Waa maxay cuna qabateynta midabada leh
Barandhada baradhada ee Colorado waa mid adag, khaasatan tan beerta ah ee marwalba ku filan waxa ay cunaan - dalagyada bidix: baradhada, yaanyada, ukunta, basbaaska macaan; cayayaanku sidoo kale wuu cunaa tubaakada, habeenkii qorraxda, dhirta qoryaha, henbane, physalis iyo petunia. Larvae iyo imago ku quudiya caleemaha yar yar, ubaxa iyo caleemaha dhirta, iyo xilliga dayrta - on digriiga baradho. Caadi ahaan, duqsigu wuxuu ku yaallaa aag yar oo beerto ah, cuno qaybta dhulka ee hal geedka, ka dib markii uu u guuro dhinaca kale, dhaqammada ay waxyeeleeyeen way engegaan oo si tartiib ah u dhintaan. Tan iyo markii cayayaanku si firfircoon u faafiyo oo si deg deg ah u faafo, caleemaha iyo jirridda dhirta waxaa la cunaa dadka waaweyn iyo dirxiga labadaba. Dhibaatada ka soo duuduubka baradhada Colorado waa mid aad u weyn waxaana lagu xisaabin karaa hektaraha beeraha lagu beeray.
Ma taqaanaa? Dadka qaangaarka ah ee baradhada barafka ee Colorado waxay ku seexan karaan dhulka ilaa saddex sano, ka dib markii ay muuqan karaan dusha sare - tani waa sida ay uga badbaado sanado gaajo ah.
Ku dhufasho ee baradho duqsiyo Colorado
Guga, saddex ilaa shan maalmood ka dib soo ifbaxa ee Colorado kuwa Colorado on dusha ciidda, habka of dhalashada ay bilaabmaysaa, kaas oo socdaa ilaa dayrta. Beerka laf dhabarta ah, dhedigga ukumo ku rid qadarka 20-70 gogol oo ah meelo bannaan oo ku yaalla dhabarka caleemaha ama dooxada caleemaha. Ka dib 7 ilaa 20 maalmood, boogta lafaha ee ukunta, ka dibna maraya marxaladda dabiiciga ah, bilowga xagaaga jiilka dhalinyarada ee cayayaanka qaangaarka ayaa u muuqda. Dirxiga oo kaliya uun ka soo baxay ukunta waxay leeyihiin dherer ilaa 3 mm waxayna mar hore ku quudiyaan caleenta suuban. Qaybta nolosha ee cayayaankan ayaa si faahfaahsan uga hadli doona cutubka soo socda ee qodobkan. Hal hal dheddig haween ah xilli xili kasta waxay awood u leedahay in ay u dhigto ilaa kun oo ukumood.
Xaaladaha ugu habboon ee dhalashada iyo horumarinta jiilka dhalinyarada ee cayayaanku waa heerkulka + 21 ... +23 ° S iyo qoyaanka heerka 70-80%. Heerkulka hoos ku xusan +15 ° C ma dhicin.
Nolosha nolosha ee baradhada barafka Colorado
Haddii dayrta dheddiggu wuxuu lahaa waqti ay ku bacrimiso, guga isla markiiba ka dib markii suunka u jiifin doonaa ukunta, kuwaas oo ka dib markii ay 2-3 miraha ka muuqdaan. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah horumarinta dirxiga ee baradho baradho ah oo Colorado ah waa afar qaybood oo da 'ah, mid kasta oo ka mid ah kaas oo ku dhamaanaya molt. Marxaladda koowaad ee da'da, maskaxda midabka leh ee caleemaha ayaa si weyn loogu daboolay timaha, jidhkoodu wuxuu gaaraa dherer 1.6-2.5 mm, wuxuuna quudiyaa hilibka jilicsan ee caleemaha yar yar. Marxaladda labaad ee da'da, ubaxa ayaa waxoogaa yar u egtahay timo, dhererkeedu waa 2.5-4.5 mm, waxay ku quudisaa qaybta jilicsan ee saxanka caleen, ka hor intaan qalfoofin. Marxaladda sadexaad ee dirxiga ayaa ka gudubta midabka lebiska, jidhku wuxuu gaaraa 5-9 mm. Heerka afraad ee da'da waa dhererka dirxiga waa 10-15 mm, midabkuna wuxuu ka yimid jaale-casaan ilaa hano-cas cas, marxaladdaani cayayaanku waa kan ugu caansan kahor intaan hirgelin.
Waa muhiim! Dhibaatada ugu weyn ee warshadaha beeraha waxaa sababa dirxiga ah baradho baradho ah oo Colorado ah, taas oo u baahan waxyaabo badan oo nafaqo ah horumarintooda.
Cunto ka mid ah dirxiga ee Colorado baradho baradho waa mid aad u khafiif ah, oo ku dhowaad dhammaan caleenta geedka burburay. Ka dib laba ama saddex toddobaad, miraha ayaa 10-3 cm ku ridaa ciidda loogu talagalay ardayda. Iyada oo ku xiran heerkulka dhulka, ubaxa waxay ku dhalataa 10-18 maalmood. Dhalinyaro farcan ah waa orange ama casaan, dhererkoodu waa qiyaastii 9 mm iyo ballaciisu waa 6 mm, ka dib saacado yar ka dib isbeddelkiisu u eg yahay bunni. Inta lagu jiro bilawga bilaha dayrta, duqsigu wuxuu ku sii jiraa jiilaalka carrada, ma aha in uu kor u kaco. Haddii isbedelka shakhsiyaadka qaangaarka ahi ay dhacaan xilliga gu'ga-xagaaga, xayawaanku waxay dillaacaan dusha sare.
8-21 cisho ee ugu horreysa nolosheeda, imago ayaa si firfircoon wax ugu qabta, kaydinta nafaqooyinka taas oo faa'iido u yeelan doonta dejinteeda iyo fogaanta fog. Qayb weyn oo qaangaar ah ayaa awood u leh, iyadoo ay ku caawineyso dabaysha, si ay u socoto dhowr tobanaan kiilomitir oo ka timaada meesha uu ka yimaado ukunta. Marka laga soo tago isbeddelka, kuwa lamid ah waxay yareyn karaan dhaqdhaqaaqa muddada qalalan ama kulul, oo hurdo dheer ah ku dhacaya illaa 30 maalmood, ka dib marka hawshu socoto. Nolosha nololeed ee Colorado baradho baradho waa 2-3 sano, inta lagu guda jiro taas oo si goos goos ah ku dhicin duufaan dheer.
Xagee iyo sidee ayuu barafka barafka barafka jiilaalka
Halkee baradho baradho ah oo Colorado ku nool yihiin xilliga qaboobaha - su'aashan xiisaha leh ee bannaanka u badan kuwaas oo la dagaalamaya cayayaankan laga badbadali karo. Ka dib markii qaangaar qaangaar ah ka soo baxo pupae xilliga dayrta, waxay ku sii jirtaa jiilaalka illaa guga ee dhumucda dhulka. Qaybaha waaweyn ee dayrta xilliga dayrta waxaa lagu aasay dhulka loogu talagalay jiilaalka, waxayna ku noolaan karaan barafka ilaa -9 ° C. Jiilaalka ka mid ah cayayaanku wuxuu ku dhacaa ciidda qoto dheer oo ah 15-30 cm, ciidda bacaadka ah ee duqsigu wuxuu aadi karaa qoto dheer si qoto dheer ah nus mitir. Qaar yar oo ah dadka duqsiya ee ku jira dhirtii aad u daran ayaa laga yaabaa inay dhintaan, laakiin, sida caadiga ah, cayayaankaasi waxay u dulqaadanayaan jiilaalka si fiican, iyagoo joogaya hibbaar dheer. Marka ciidku uu kulayliyo ilaa 14 ° C oo heerkulka hawadu ka sarreeyo 15 ° C, duqsiyadu waxay bilaabaan inay toosaan hurdada iyo si tartiib ah u soo baxaan dhulka dushiisa iyagoo raadinaya raashin.
Ma taqaanaa? Dumarka, ukumaha ukunta, waxay ku adkeeyaa jiilaalka ka sii daraya, sababtoo ah iyadu ma kaydiso qadarka xaddiga ah ee kaydka baruurta.
Beerka Beerta Been-abuurka ah
Halka dabiiciga ah baradho qashin (Leptinotarsa ​​juncta), taas oo ah wax yar ka yar Colorado waxayna ka duwan tahay midabka. Dhererka kaamilada beenta ah badi kama badna 8 mm, ciriiriga ayaa midabkiisu ku yaal calaamado kale oo cad, madow iyo jaalle ah, lugaha ayaa madow ku jira, calooshuna waa midab madow. Xayawaan beenta ah ma waxyeelo beeraha, maadaama ay jecel yihiin dhirta duurjoogta ah ee habeenkii - Caroline iyo bittersweet, iyo sidoo kale Physalis. Qaar ka mid ah bakhtiyaa been ah ma cuno baradhada mana u isticmaali dusha sare ee taranka, sida dhaqamada kale ee dhadhanka leh ee baradhada baradhada Colorado.